Our Blog - ထုပ်ပိုးများအတွက်ဖဲကြိုးဖျက်စီး (RSPAC.)
အားဖြင့် ချားလ်စ်က Wong|ဇန်နဝါရီလ 2nd, 2019|Categories: Uncategorized|
ဟာ Off comments အပေါ်6ခရစ္စမတ်လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးပြီးအတွက် Must-ရှိသည် Tools များနှင့်ပစ္စည်းများ 2019
အားဖြင့် ချားလ်စ်က Wong|နိုဝင်ဘာလ 1st, 2018|Categories: Uncategorized|
သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးမှလက်ဆောင်ပူဇော်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျအရာအားလုံးပြီးပြည့်စုံသေချာစေချင်. သင့်ရဲ့ဆုကြေးဇူးကိုမြှင့်တင်ရန်သောအရေးအပါဆုံးအချက်တစ်ခုမှာထုပ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်. လက်ဆောင်များကိုအထူးများမှာ, regardless of the reason [...]
ဟာ Off comments အပေါ် "" "အသုံးပြုရလွယ်ကူ" ဖဲကြိုး Shredder
အားဖြင့် ချားလ်စ်က Wong|ဇွန်လ 25, 2018|Categories: 2018-6|အမှတ်အသားများ (Tags): ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး, ဖဲကြိုးဖျက်စီး curler, ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး tool ကို, RSPAC|
လက်ဆောင်ပေးမယ်ထုပ်ယခုပြီးတော့ဖြစ်ပျက်တဲ့အထူးလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်. သင့်အနေဖြင့်အားလပ်ရက်များအတွက်လက်ဆောင်များအရှေ့ဥရောပ, တောင်အာဖရိကနိုင်,afriend's birthday, တစ်မိသားစုပြန်လည်ဆုံဆည်း, သို့မဟုတ်သင့်အသက်တာ၏မေတ္တာသည်. Experience will show [...]
ဟာ Off comments အပေါ် RSPAC
အားဖြင့် ချားလ်စ်က Wong|January 11th, 2018|Categories: Gift wrap idea|
ဟာ Off comments အပေါ် Craft Ideas with Ribbon Shredder – How to Make Ribbon Flowers – Craft Projects
အားဖြင့် ချားလ်စ်က Wong|စက်တင်ဘာလ 8, 2017|Categories: Uncategorized|
အဆိုပါmоѕtdіffеrеntgіftѕအဘို့အလိုလျှင်wеကြည့်оut, အဘယ်ကြောင့်nоtဆုကြေးဇူးကိုထုပ်ပိုးပြီးthеmdіffеrеntlуtооthеn? လက်ဆောင်ပေးမယ် wrarring iѕaѕ imrortant aѕဆုံးသင့်လျော်သောဆုကြေးဇူးကိုѕelesting. တစ်ဦးကကောင်းစွာ-ပတ်ရစ်gіftလူတစ်ဦးရဲ့еffоrtѕပြသ [...]
ဟာ Off comments အပေါ် လက်ဆောင်ထုပ်ပိုးပြီးတွေအတွက်အကြံပြုချက်များ: ဒီခရစ္စမတ်သင့်လက်ဆောင်များထုပ်လုပ်နည်း
တစ်ဦး Dynamic ဖဲကြိုး Shredder ပန်းပွင့်လေးဖန်တီးနည်း?
အားဖြင့် ချားလ်စ်က Wong|ဇူလိုင်လ 31 ရက်, 2017|Categories: 2017-2, ဘယ်လို|အမှတ်အသားများ (Tags): ဖဲကြိုး curler ဖျက်ဆီး, ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး, ဖဲကြိုးဖျက်စီး curler, ဖဲကြိုးဖျက်ဆီး tool ကို, ဖဲကြိုးဖျက်စီး tool ကို, ဖဲကြိုး Stripper, ဖဲကြိုး Stripper, ဖဲကြိုးအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ် tool ကို|
ဖဲကြိုး Shredder ပန်းပွင့်ကဘာလဲ? ပြီးတော့ Dynamic Ribbon Shredder Flower Bow ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? သငျသညျဖဲကြိုး Stripper လိုအပ်ပါလိမ့်မည်- (www.ribbon-shredder.com) polyester ဖဲကြိုး - 2〃wide (အရောင်နှစ်မျိုးရွေးချယ်နိုင်)(ကောင်တီတောင်း) double-တဖက်သတ်တိပ် Clear ကိုတိပ်ကတ်ကြေးတစ်ဦးသည်ခေတ်သစ် [...]
ဟာ Off comments အပေါ် တစ်ဦး Dynamic ဖဲကြိုး Shredder ပန်းပွင့်လေးဖန်တီးနည်း?